Codso SNAP - Shuraakada Oregon-Gaajo-la'aanta
Para ver esta página en Español haga halkan guji.
Ma waxaad raadinaysaa agab aad ku caawinayso in aad cunto? SNAP waxay kaa caawinaysaa inaad miiska saarato cunto caafimaad leh, si aadan u kala dooran waxyaabaha ay ka midka yihiin dawooyinka, kirada ama cuntada. Codsashada waa sahlan tahay, hoos u dhaadhac si aad u ogaato sida.
Faa'iidooyinka SNAP ee dheeraadka ah ayaa si toos ah loo bixiyaa inta lagu jiro cudurka faafa - wararkii ugu dambeeyay, riix halkan
U qalmida waxay ku salaysan tahay inta badan dakhliga bishii. Taas waxaa ka mid ah dakhliga shaqada laga kasbado, iyo sidoo kale dakhliga aan la kasban sida badbaadada bulshada, naafada, masruufka ilmaha iyo wax ka badan. Inta badan dadka reer Oregon, agabka sida guri, baabuur ama lacagta bangiga ku jira kuma xisaabsana xaq u yeelashada. Waxa laga yaabaa in aad heli karto SNAP haddii aad shaqaynayso, shaqo la'aan ku jirto, ama aad dugsi galayso. Waxaa jira dhawr kooxood oo dad ah oo leh tixgelin dheeraad ah marka ay codsanayaan SNAP. Hoos ka hel macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan u-qalmitaanka SNAP ee ardayda tacliinta sare, dadka waaweyn ee aan lahayn carruur da'doodu tahay 18 ilaa 50, iyo dadka waaweyn ee hoose:
Dadka waaweyn ee aan carruurta lahayn (18-50)
Dadka Waaweyn (60+)
Tilmaamaha Dakhliga Qoyska ee Oregon 2021*
185% ee Heerka Saboolnimada Federaalka
*Qaddarka bisha ayaa kor u kaca $691 qof kasta oo dheeri ah. Tilmaamaha dakhliga ee gobolada kale way ka duwanaan karaan.
Sida Loo Codsado SNAP
Buuxi arjiga khadka tooska ah. Haddii aad u baahan tahay kaalmo buuxinta codsigaaga khadka, wac 1-855-626-2050 (lacag-la'aan), Isniin-Jimco 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo. Codsiga khadka tooska ah ayaa hadda lagu heli karaa Ingiriisi iyo Isbaanish.
Buuxi oo ku soo gudbi codsiga SNAP emayl ahaan. Xiriirinta codsiyada PDF ee luqadaha soo socda, qaar badan oo iyaga ka mid ah waa la buuxin karaa: English, Spain, Ruush, Vietnamese, somali, Carabi, Burma, Nepal, Ingiriisi-Large Print, Iyo Isbaanish-Daabacaadda Weyn.
Ku soo gudbi email ahaan [emailka waa la ilaaliyay]
Codsiyada sidoo kale waa la daabici karaa oo lagu soo gelin karaa goobtaada Xafiiska DHS SNAP.
Wac a Xafiiska DHS SNAP si aad telefoon uga codsato ama ay kuugu soo diraan arji si aad u buuxiso oo aad u soo celiso.
Booqo a Xafiiska DHS SNAP oo soo qaado, buuxi, oo soo rog codsi warqad ah. Xafiisyada intooda badani waxay bixiyaan adeeg isla maalinta ama maalinta xigta ee waraysiyada.
Shaqaale u-qalmitaanka SNAP ayaa kula kulmi doona shakhsi ahaan ama taleefan.
Waxaad u baahan doontaa inaad bixiso:
A. Aqoonsiga (sida shatiga darawalnimada)
B. Lambarada Bulshada ee qof kasta oo codsanaya (kaadhadhka asalka ah looma baahna)
C. Caddaynta dakhliga 30-kii maalmood ee u dambeeyay (sida jeegagga jeegga)
D. Dadka aan muwaadinka ahayn, caddaynta sharciga soo-galootiga ee xubnaha qoyska ee raadinaya manfacyada
Markaad hesho kaarka EBT ee SNAP, waxaa lagu siin doonaa buug yar oo ku saabsan sida loogu isticmaalo gadaashada cuntada.
Dadka waaweyn iyo dadka naafada ah waxay bilaabi karaan nidaamka codsiga iyagoo si fudud u waca Xafiiska Adeegga Sare ee deegaankooda. Wareysiyada waxaa lagu sameyn karaa taleefanka, xafiis, booqasho guri, ama wakiil la magacaabay.
Soo hel Xafiiska SNAP ee kuugu dhow
Wac 2-1-1 ama booqo Mareegta DHS
La xidhiidh Diana Rojas (hablo Español)211info Iskuduwaha Barnaamijka Cuntada iyo U doodaha SNAP971-266-2903; [emailka waa la ilaaliyay]